Izibikezelo kunye neSiprofeto ngo-Agasti 2017: I-New End of World
Ukubikezelwa kwabaprofeti abadumileyo kunyaka ka-2017 babebuhlungu kakhulu. UVanga noNostradamus baxela imfazwe enegazi, abavumisi beenkwenkwezi-i-cataclysms, i-psychics-imeko enzima kwezoqoqosho. Azikho zonke izibikezelo ezizalisekile ngokupheleleyo, kodwa isiqingatha sesibini se-2017 sisasaphambili. I-Esotericists iyaqaphela ukuba inyanga yokugqibela yasehlotyeni ayiyi kuba lula. Iziganeko ezimbini zeenkwenkwezi ziya kuba negalelo kulo, okokuqala.
Ngo-Agasti 2017: izibikezelo zeenkwenkwezi
Ngo-Agasti 2017 ibhalwe ngamagqabi amabini - ilanga kunye nenyanga. Ixesha eliphakathi kwabo beenkwenkwezi babiza "i-corridor". Ukuvuthwa kokuqala kuya kwenzeka ngo-Agasti 7, 21:20 ngexesha laseMoscow. Ngaloo mini, inyanga iya kuhlanjululwa kwiqhina lomthunzi womhlaba. Iingcaphephe zincoma ukuba zingaqalanga noshishino olubalulekileyo, ukuphepha iingxabano kunye nomngcipheko, ungaboleki imali kwaye ungabhondi nayiphi na into. Qaphela ukuba umphumo ombi wokukhaliswa kwelanga kuqhubeka iintsuku ezimbalwa ngaphambi nangemva kokuqala kwawo. Ukuphela kokuphela kwelanga kuyasilinda ngo-Agasti 21 ngo-21:21 ngexesha laseMoscow. Kuya kuhlala malunga nemizuzu emithathu. Impembelelo emihle yaloo mini iya kuvezwa ngabo bonke abameli beempawu zezodiac. Ukugqithwa kweso sigqibo se-Leo, kunye nesimo esithile seMars kunye neNyanga, kuncedisa ekuzalisekeni, ukuphumelela kwimisebenzi yezobugcisa, ukuzuza kunye nokuqiniswa kwezezimali. Lungiselela ukudibanisa kwiimeko ezintle. Iingcamango ezingalunganga ziza kukhulisa le ntleko kwaye zivale amathuba okulungisa isigqibo esinzima. Ngelo xesha, abavumbuli beenkwenkwezi bayalumkisa ngokulimala okongezelelweyo ngexesha lokusukela ngo-Agasti 2 ukuya ku-9 no-Agasti 16 ukuya ku-Agasti 23, 2017. Kule mihla, ubunzima beemeko eziphuthumayo, ukungquzulana kwifomu enobundlobongela, iingxaki zanda. Umbuso wezempilo ungadluka ngokugqithiseleyo, ngakumbi kubantu abaneentsholongwane zomzimba.
Ngaba ndimele ndilindele ukuphela kwehlabathi ngo-Agasti 2017?
Amajelo athetha ngokucokisekileyo ngesihloko sesigxina esilandelayo sehlabathi. Umhla othile uvela kwakhona ngo-Agasti 19, 2017. Kwiziprofeto zikaMatona waseMoscow, lo mhla udibene noluhlobo oluthile lokujika, oluya kuba nefuthe kubo bonke abantu. Ezinye zichaza ubungqina bayo njenge-harbinger yentlekele yehlabathi okanye ukuphela kwehlabathi. Ngokwezinye iinguqulelo, amazwi akhe malunga 'neembandezelo ezinkulu' inokuthi ihambelane nobhubhane obukhulu, ukudibana komhlaba kunye nomnye umzimba wasezulwini kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zenuzi. Akukho ncazelo ecacileyo yesiprofeto okwangoku. Abavumbuli beenkwenkwezi bayaqiniseka ukuba uAgasti akayi kuphawulwa ngamatyala amakhulu okanye ezinye iziganeko ezibulalayo. Kodwa ukuxhamla koMnyama weNyanga kunye noSaturn kubonisa iimvavanyo ezizayo, kwaye inkcaso yeMarro-Earth isongela ukuxhathisa iingxaki zongquzulwano. Imimiselo ilumkisa ngeliso: ngo-Agasti kuya kuba neemeko ezininzi ezibandakanya umngcipheko ebomini. Ngokuqhelekileyo, inyanga ayikwazi ukubizwa ngokuthi ayibi. Ukuba ukholwa ngabavumisi beenkwenkwezi, ixesha le-apocalypse alikafiki. Inokwenzeka ukuba, isiprofeto sikaMatrina asifanele sichazwe ngokuchanekileyo, kodwa sisetyenziswe. Abaninzi bathambekele ekukholweni ukuba wayebhekiselele kwingxaki engokomoya yoluntu, eya kutshintsha inkolo kunye nemilinganiselo yokuziphatha.
Ukuxoxwa ngentshiseko eKrismesi - imilingo yemigangatho yokufezekisa iminqweno
Ukuxhamla i-Fortune-tell on a Christmas for the best way to know the future
Indlela yokutya kwimozulu ebanda
Inzuzo yama-crranberries kwimpilo
I-Pasta kunye ne-pesto sauce kwi-khabichi yama-kale kunye nama-walnuts
I-pneumonia: unyango kunye nokuthintela
I-Peking isaladi yekhabishi ngamantongomane
I-Scallops enefom lemon
Ukupaka ngamapheya kunye ne-grappa
U-Alexei Vorobiev wadibanisa nemikhosi embi esesitimeleni
Izimfihlelo zobuhle ezivela kwihlabathi jikelele